पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता हुँ, पाटीले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्छु – Maitri News
पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता हुँ, पाटीले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्छु
Mohan Bastola August 21, 2019
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेकपा स्कुल विभाग प्रमुख
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्कूल विभागको विषय अहिले मुख्य चर्चामा छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले उक्त विभागको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि यो विषयमा थप चर्चा भएको छ । पोख्रेलसँग मुख्य गरेर यहि विषयमा केन्द्रित रहेर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्कूल विभागको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । यो सन्दर्भमा चाँहि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ?
म पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले मैले पार्टीले दिएका हरेक जिम्मेवारीलाई यो अघि पनि पूरा गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । त्यसै क्रममा अहिले मलाई पार्टी स्कूल विभागको जिम्मेवारी पार्टी सचिवालयको निर्णयबाट मैले प्राप्त गरेको छु । मैले पहिला प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई मेरो योग्यता, क्षमताले पूरा गर्ने प्रयत्न गरे जस्तै यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने गरी लाग्ने छु ।
फरक–फरक लक्ष्यसहित हिडेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएको अवस्थामा विचारलाई पनि संगठित बनाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालेको विभागको काँधमा छ । यसलाई चाँहि कसरी लिनु भएको छ ?
यसलाई सबै भन्दा पहिला यसरी बुझ्नु पर्छ । हामी पहिला आ–आफ्नो बैचारिक मान्यता अनुसार अघि बढेका थियौँ । त्यो सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा हाम्रा आआफ्नौ कार्यशैली पनि थिए । परिवर्तित सन्दर्भमा हामी एक भएका छौँ । अहिले नेकपा एमाले पनि छैन र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मात्रै छ । त्यसैले अब हाम्रो पार्टीका अध्यक्षदेखि हामी सबैले के बुझ्नु पर्छ भने यो नयाँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने हाम्रो संकल्प हो, त्यो बन्नुपर्छ । दुनियाँभरी कम्युनिष्टहरु फुट्न मात्रै जान्दछन् भन्ने असाध्यै नकारात्मक धारणा अहिले फैलिएको छ ।
यस्तो बेलामा हामी फुट्न मात्रै होइन जुट्न पनि जान्दछौँ भन्ने हामीले एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छौँ । यहाँको परिस्थिति अनुसार यहाँको माक्र्सवादलाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ । विगतमा हाम्रो बारेमा हामी उपयुक्त समयमा बस्तुनिष्ठ समिक्षा गर्ने नै छौँ । तर, अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ । हामी विचारमा समान छौँ । संगठनात्मक हिसावले सुदिृढ बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी समान छौँ र नेतृत्व निर्माणको एउटा बैज्ञानिक विधिबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी समान छौँ । अलकअलक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई पार्टी एक ठाउँमा मिसिएपछि अलिक परसम्म दुई नदी मिल्दा पानीको अलकअलक रंग देखिए जस्तो हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, अब हामी एक भै सकेका छौँ अब रंग पनि छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले हामी अब एक ढिक्का भएर अघि बढेका छौँ ।
त्यसैले यति बेला पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादीका कुरा अघि सारेर अहिलेको ऐतिहासिक एकतालाई विथोल्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुदैँन । यसलाई कमजोर ढंगले बुझ्ने काम पनि कसैबाट गर्नुहुँदैन । त्यो कसैमा पनि छैन । जुन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने गहन जिम्मेवारी चाँहि हाम्रा सामू छ । अहिले पनि कतिपय नमिलेका कुरामा दुई अध्यक्ष बसेर गृहकार्य गर्ने, उहाँहरुले धारणा ल्याउने र हामीले सामूहिक रुपमा निर्णय गरेर पठाउने गरेका छौँ । अझै पनि हामीले एकता प्रक्रियाका केही बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । हामी त्यसलाई पनि जति सक्दो छिटो टुंगोमा पुर्याउने छौँ । हामी यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने वित्तिकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक पनि राख्छौँ र त्यो बैठकबाट हामीले गर्नुपर्ने थप कामको योजना बनाएर अघि बढ्छौँ ।
जहाँसम्म पार्टी स्कूल विभागको सन्दर्भ छ । हाम्रो पार्टीमा ३३ ओटा विभाग छन् । ती मध्येको एक महत्वपूर्ण विभाग पार्टी स्कूल विभाग पनि हो । कुनै विभागले आफ्नो छुट्टै नयाँ निर्णय गरेर पार्टी एकातिर विभागहरु अर्कैतिर हुने होइन, हुन सक्दैन । बरु पार्टीले गरेका संस्थागत निर्णयलाई ती विभागले कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । विभागले पनि पार्टीलाई चलायमान बनाउन आफ्नो विभागका गतिविधिलाई संस्थागत ढंगले चलायमान बनाउने हो । त्यसैले यसलाई अन्यथा ढंगले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र बुझ्न जरुरी पनि छैन ।
कतिपय कुरा बाहिर आउँदा भित्रको यथार्थ नबुझि आइदिन्छन् । अनि हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर बहसमा सहभागी भइदिन्छौँ । त्यसले भित्रि कुरालाई बोकेको हुँदैन । यो समस्याका रुपमा पनि आएको छ । यो विषयमा मैले एक शब्दमा भन्दा अरु नेताहरुले विभिन्न जिम्मेवारी पाउनु भयो त्यति मध्येको एउटा जिम्मेवारी मैले पनि पाएको हुँ ।
हो, मैले अघि पनि भने यो विभाग मैले पाउने वित्तिकै मैले फरक ढंगले चलाउने कुरा त होइन । मैले पार्टीको निर्णय अनुसार नै चलाउने हो । त्यसैले यो विषयमा धेरै बहस र चर्चा गर्नुको औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हरेक विभाग पार्टीको अधिनस्त भएर चलेका हुन्छन् । योजना पनि त्यसै अनुसार चल्ने हुन् । मैले पनि चलाउने त्यसैगरी हो ।
बैचारिक रुपमा दुई पार्टीलाई एक बनाएर अघि लैजाने कुरामा तपाईँको भूमिका महत्वपूर्ण रहने छ ?
हामी जुन बैचारिक जगमा उभिएका छौँ । त्यो जगमा उभिएर त्योसँग गाासिएका कतिपय पृथक–पृथक लाग्ने पृथक–पृथक देखिने कुरालाई मिलाएर जानुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । फेरि पनि भन्न चाहन्छु अब एमाले पनि छैन । माओवादी पनि छैन । अहिले हामी सबै नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भएका छौँ । हामी त्यहि अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । यो पार्टीमा सुसंगत, बैचारिक श्रृंखला हुनुपर्छ त्यो भएन भने त्यो विचार बोकेर हिड्ने मान्छेहरुको पङ्क्ति पनि कमजोर भएर जान्छ । त्यसैले यो कुरामा पनि हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
आज हामी संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको कुरा, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा, समाजका बहुलता, बहुलवादी खुला समाज जस्ता कुरालाई हामी मानेर अघि बढिरहेका छौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामी यस्ता कुराबाट निर्देशित भएर हामी अघि बढ्ने हो । राज्य सञ्चालनका यी मुलभूत कुरालाई हेक्का राख्दै अघि बढ्नु पर्ने पनि दायित्व छ ।
हाम्रो यतिबेलाको विचार यी नै कुरामा निर्देशित भएर अघि बढ्छदै माक्र्सवादलाई सिर्जनात्मक ढंगले लागु गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । पार्टी स्कूल विभागले पनि यी कुरालाई नै सिर्जनात्मक ढंगले देशव्यापि ढंगले पार्टी पङ्क्तिमा लैजान्छ ।
Previous Previous post: छ सय वर्ष पुरानो घाँसेपुल
Next Next post: संसदबाट पास भयो भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने विधेयक